7 ဥရောပ၌အဆိုပါ Beaten Path ကို ဦး တည်ရာကိုချွတ် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား >7ဥရောပ၌အဆိုပါ Beaten Path ကို ဦး တည်ရာကိုချွတ်
နေရာအသစ်များကိုခရီးသွားခြင်းနှင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းကအိပ်မက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်စေသည်, ရဲ, နှင့်သင်ယူပါ. ထိုကဲ့သို့သောကျယ်ပြန့်ကမ်ဘာပျေါတှငျ, အရာအားလုံးကိုကြည့်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး, ဥရောပရှိနေရာတိုင်းတွင်အတွေ့အကြုံနှင့်ပျော်မွေ့ရန်လည်းမဖြစ်နိုင်ပါ. ဤမျှလောက်များစွာသောစိတ်လှုပ်ရှားစရာနေရာများနှင့်အတူ, သငျသညျသာသူတို့အားလုံးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အိပ်မက်မက်နိုင်ပါတယ်. သငျသညျအမှန်တကယ်ဒေသခံတစ် ဦး နှင့်တူပျော်မွေ့ဖို့လမ်းကြောင်းအသစ်နှင့်လမ်းကြောင်းမှဖွင့်လျှင်, ထို့နောက်ငါတို့ရှိသည်7သင်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အဘို့အရိုက်နှက်လမ်းကြောင်းနေရာများပိတ်ထားထူးခြားသော.
ပြင်သစ်မှဆွစ်ဇာလန်အထိ,7ရိုင်းသဘာဝအစက်အပြောက်, ငြိမ်းချမ်းသောရေကန်များ, နှင့်မှော်ဆရာရဲတိုက်များသည်ဥရောပ၌အမှတ်ရစရာအားလပ်ရက်များထဲမှသင်၏ဓါတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာရန်စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်. ဒါကြောင့်, အလင်းထုပ်ပိုးပြီးသင်နှင့်အတူအမှတ်တရများနှင့်ပုံပြင်များသာသယ်ဆောင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်, သငျသညျသစ်တစ်ခုစွန့်စားမှုစတင်အဖြစ်, ခရီးမသွားသောလမ်းများကိုသာလျှောက်လှမ်းပါ.
1. Off အဆိုပါ Beaten Path ကိုနေရာများ: Occitanie, ပြင်သစ်
မြေထဲပင်လယ်နှင့် Pyrenees ၏ထိပ်နှင့်အတူနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်, ပြင်သစ်ရှိတောင်ပိုင်းအိုစီစီဒေသသည်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသည်. အလယ်ခေတ်ခံတပ်မြို့ဖြစ်သည်, အံ့သြစရာ, ကမ်းခြေ, နှင့်စပျစ်ရည်, ဒီပြင်သစ်ဒေသဟာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပြီးဥရောပမှာအနှံ့အပြားသွားလာနေတဲ့လမ်းကိုရောက်နေပြီးသင့်ရဲ့ရေပုံးစာရင်းထဲမှာထိပ်ဆုံးရောက်နေတယ်.
Occitanie သည် French Riviera နှင့် Paris တို့နှင့်အလွန်ကွာခြားသည်, ၎င်း၏နှေးကွေးနေပြီးအိပ်မက်မက်နေသောအရှိန်အဟုန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်. ထို့ကြောင့်, Cathar Country နှင့်၎င်း၏ရဲတိုက်များကိုစူးစမ်းလေ့လာသင့်သည်, အထင်ကြီး Carcassonne အပါအဝငျ. သငျသညျတောင်တက်သို့မဟုတ်ဖောင်ကဲ့သို့ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများကိုနှစ်သက်လျှင်, ထို့နောက် Gorges du Tarn ချောက်နှင့် Cevennes အမျိုးသားဥယျာဉ်စံပြဖြစ်ကြသည်. အဆိုပါ အမျိုးသားဥယျာဉ် ယူနက်စကို၏ဇီဝထုအရံဖြစ်သည်, နှင့်ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိအမျိုးသားဥယျာဉ်ဆယ်ခုအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်.
သငျသညျပန်းရောင်နှင့်ချစ်စရာကောင်းဒေသ၏မြို့တော်၌သင်တို့၏အခြေစိုက်စခန်းစေနိုင်ပါတယ်, Toulouse, သို့မဟုတ်ချစ်စရာကောင်း Albi မြို့. နှစ် ဦး စလုံးဟာရိုက်နှက်လမ်းကြောင်းမှအဘို့အအံ့သြဖွယ်ရှိပါတယ် မြို့ချိုး ပြင်သစ်နှင့်ကြာကြာစွန့်စားမှုနှင့် ပြင်သစ်အားလပ်ရက်. သင် Toulouse ကိုအလွယ်တကူနဲ့အဆင်ပြေစွာရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် ရထားခရီးသွားဖြင့် အကြောင်းကိုအတွက်ပဲရစ်နှင့်ဘာစီလိုနာကနေ5နာရီ.
ရထားဖြင့်လိုင်ယွန်သို့ Toulouse သို့
ရထားအားဖြင့် Toulouse မှပဲရစ်
ရထားအားဖြင့် Toulouse မှ Nice
ရထားဖြင့် Toulouse သို့ Bordeaux သွားမည်
2. Hallstatt, သြစတြီးယား
Hallstatt ကျေးရွာသည် Hallstatt ရေကန်တွင်တည်ရှိသည့်ပုံပြည့်စုံသောရွာဖြစ်သည်. နွေ ဦး ရာသီ၌, ကျ, ဒါမှမဟုတ်ဆောင်းရာသီ, ၎င်းသည်မည်သည့်ရာသီမဆိုပကတိပရဒိသုဖြစ်သည်, အဆိုပါ adrenaline ဝါသနာအိုးခရီးသွားများအတွက်အဘို့အပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများအများကြီးကမ်းလှမ်း. ဒါမှမဟုတ်ဆန့်ကျင်ပေါ်မှာ, သငျသညျစပျစ်ရည်ကိုတစ်ခွက်နှင့်အတူအိုင်နားမှာအေးအေးဆေးဆေးအိပ်မက်မက်နေတယ်ဆိုရင်သို့မဟုတ် လှေစီးစီးပေါ်မှာ ကန်ပတ်ပတ်လည်, Hallstatt သည်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်.
ဤ သာယာလှပသောနေရာ ငါတို့အဲဒါကိုလုပ်ခဲ့တယ်7အားကြီးသောဂူများကို ကျေးဇူးတင်၍ ဥရောပတိုက်တွင်လမ်းဆုံးသောနေရာများသို့သွားသည်, ကြည်လင်ပြာသောရေကန်, ဥမင်မြို့နှင့်မြို့နယ်၊ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အမြင်များ နှင့်လမ်းကြောင်း. ထည့်မပြောပါနှင့်, အဲဒါကိုသေးကမ္ဘာ၏ကျန်များကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.
Hallstatt ဖြစ်ပါတယ်3ဗီယင်နာမှနာရီပေါင်းများစွာရထားဖြင့်သွားရခြင်း. ထိုကွောငျ့, သငျသညျသြစတြီးယားရဲ့ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာရှုခင်းများအတွက်မမေ့နိုင်သောအားလပ်ရက်ချင်လျှင်, နှင့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့ ဝေးလူအစုအဝေးကနေ, ထို့နောက် Hallstatt ဟာရိုက်နှက်လမ်းကြောင်းကို ဦး တည်ရာကိုချွတ်စုံလင်သည်.
ရထားအားဖြင့် Hallstatt မှမြူးနစ်
အင်းအားရထားဖြင့် Hallstatt သို့ပို့သည်
ရထားဖြင့် Hallstatt သို့ Passau
ရထားအားဖြင့် Hallstatt မှ Rosenheim
3. Off အဆိုပါ Beaten Path ကိုနေရာများ: Haarlem, နယ်သာလန်
သူ့အိမ်နီးချင်းအမ်စတာဒမ်နှင့်ရော့တာဒမ်ထက်လူသိနည်းသည်, Haarlem အဆိုပါရိုက်နှက်လမ်းကြောင်းကိုချွတ်အကောင်းဆုံးမြို့ဖြစ်ပါတယ် နယ်သာလန်နိုင်ငံ. သာ 18 အမ်စတာဒမ်မှမိနစ်အနည်းငယ်ရထားဖြင့်ထွက်ခွာသည်, Haarlem ၏ကျက်သရေသည်အနည်းဆုံးအားဖြင့်တနင်္ဂနွေအထိမင်းကိုဖမ်းစားလိမ့်မည်.
မြို့တော်ရဲ့အလယ်ခေတ်အမွေအနှစ်, သွက်ဝိညာဉ်နှင့်လေရဟတ်, အံ့သြစရာကောင်းတဲ့လေထုကိုဖန်တီးပါ. သငျသညျစစ်မှန်သောဒတ်ခ်ျအဖြစ်ဟော်လန်ကိုတွေ့ကြုံခံစားလိုလျှင်, ထို့နောက်၎င်း၏ကျဉ်းမြောင်းသောလမ်းများလမ်းလျှောက်, Grote Markt အထိ. ထိုအခါ, လေရဟတ်စက်ကိုတက်, Adriaan ကြိတ်ဆုံ, မြို့နှင့်မြစ်၏အံ့မခန်းအမြင်များသည်.
Haarlem ၌သင်၏အားလပ်ရက်အားဖြည့်ရန်နောက်ထပ်ကောင်းသောနည်းလမ်းတစ်ခုမှာအသက်အကြီးဆုံးဘီယာစက်ရုံသို့လည်ပတ်ခြင်းဖြစ်သည်. ပြန်ရောက် 1620, အဲဒီမှာ 100 ဘီယာ, နှင့်ယနေ့သင်ဆဲဟောင်းချက်ပြုတ်နည်းများအချို့မြည်းစမ်းနိုင်ပါတယ်. သာ။ ကောင်း၏, မွို့၌များစွာသောပြတိုက်များထဲမှတစ် ဦး အလည်အပတ်ပြီးနောက်, ပြီးတော့ရှိပါတယ် ပြတိုက်တွေ အခြားမည်သည့်ဒတ်ခ်ျမြို့ထက် Haarlem ၌တည်၏.
ကောက်ချက်ချရန်, အဆိုပါရိုက်နှက်လမ်းကြောင်းကိုချွတ်ဒီသည် လျှို့ဝှက်ကျောက်မျက် ဥရောပ၌တည်၏ ချစ်စရာအကောင်းဆုံးနိုင်ငံများ နှင့်တစ် ဦး အလည်အပတ်ခရီးလုံးဝတန်ဖိုးရှိ!
4. Orta ရေကန်, အီတလီ
ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်အများစုသည်အီတလီသို့အရသာရှိရန်သွားကြသည် အီတလီအစားအစာ နှင့်ဘဝရဲ့နည်းနည်းအလိုလိုကျလှနျးခွငျးပျော်မွေ့, ဒေသခံတွေလိုပဲ. သို့သျောလညျး, တစ် ဦး sipping ထက်အီတလီမှပိုရှိပါတယ် စပျစ်ရည်ဖန် လောလောလတ်လတ်လုပ်ခေါက်ဆွဲနှင့်အတူ. အဆိုပါရေကန် '' ခရိုင်ရှိ Orta ရေကန်တစ် ဦး ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်နှင့်ရင်ခုန်စရာအစက်အပြောက်ဖြစ်ပါတယ်. တောင်ကြားကြားမှာပုန်းကွယ်နေတယ်, နှင့် Monte Mottarone အားဖြင့်ကျော်ကြား Maggiore ရေကန်ကနေကွဲကွာ, Lake Orta သည်သင်၏အကြိုက်ဆုံးဖြစ်သည်, အီတလီကိုအတွေ့အကြုံရင့်ရင့်အချိန်ကာလနှင့်ဘ ၀ ၏ငြိမ်းချမ်းသောအရှိန်အဟုန်ကိုဖြတ်သန်းရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်.
မှ တောင်တက်လမ်းကြောင်း, လှေစီး, အိုင်နားမှာစပျစ်ရည်ကို, နှင့်ရေကူး, Orta ရေကန်သည်အံ့ဖွယ်အီတလီကျောက်မျက်ဖြစ်သည်, ကြောင်းသေးခရီးသွား by ည့်များကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်.
Lake Orta သည်မီလန်မှ ၂ နာရီကြာရထားစီးနိုင်သည်, နှင့်5Zurich မှ Alps ၏သာယာလှပသောရှုခင်းများမှတဆင့်နာရီ.
5. Off အဆိုပါ Beaten Path ကိုနေရာများ: Bohemia, ချက်သမ္မတနိုင်ငံ
ပုပ်ရဟန်းမင်းနှင့်ပုပ်နေသည့်ပရာ့ဂ်မှနာရီအနည်းငယ်အကွာတွင်ရှိသည်, ဒဏ္endsာရီများနှင့်သာယာလှပရှုခင်းများတစ်ပြည်စောင့်ကြို. Bohemian Switzerland နိုင်ငံ၏အမျိုးသားဥယျာဉ်, Czech Svycarsko အမျိုးသားဥယျာဉ်, ဂျာမနီနှင့်နယ်စပ်တွင်ရှိ၏. Pravcicka Brana, တစ် ဦး အံ့မခန်းကျောက်ဖွဲ့စည်းခြင်း, ရေချောင်း, များစွာသောတောင်တက်လမ်းကြောင်း, ဝေး Decin ထံမှရထားခရီးစဉ်ဖြစ်ကြသည်, အနီးဆုံးမြို့.
အပြင်ဘက်ရှိရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောနောက်ထပ်အရံတစ်ခုမှာ Kladska ဖြစ်သည် သဘာဝအရံ. အိုင်မှလှပသောလမ်းကြောင်းရှိပါတယ်, ထိုသို့အထူးသဖြင့်ကျဆုံးခြင်းအတွက်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဖြစ်ပါသည်. ဒါပေမဲ့, သငျသညျသေးငယ်တဲ့မြို့များနှင့် chateaux ကြိုက်တတ်တဲ့လျှင်, ထို့နောက်သင်သည် Neo-Gothic ကိုချစ်လိမ့်မည် Hluboka Chateau.
ရထားဖြင့် Prague သို့ Nuremberg
ရထားနဲ့ Prague မှဘာလင်
6. Antwerp, ဘယ်လ်ဂျီယံ
စက်ဘီးသို့မဟုတ်ခြေလျင်တွင်, Antwerp ဟာစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပြီးတက်ကြွစွာပါ. ဘယ်လ်ဂျီယံတွင်ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့တော်, ခရီးသွားများက Antwerp ကိုအတော်အတန်သတိမထားမိကြပါ. သို့သျောလညျး, ဒါဟာပျော်စရာဘို့ဥရောပအတွက်ရိုက်နှက်လမ်းကြောင်းကို ဦး တည်ရာကိုချွတ်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပါတယ် တနင်္ဂနွေထွက်ပြေး.
မြို့ခွဲသည်3ဒေသများ: မြို့ဟောင်း, တောင်, နှင့်ဆိပ်ကမ်း, အရာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှကွဲပြားခြားနားယဉ်ကျေးမှုနှင့်လူများ၏နေအိမ်များဖြစ်ကြသည်. ထိုကွောငျ့, ဒါဟာအချက်အပြုတ်ကောင်းကင်ဘုံသည်, သင်၏နှလုံးဆန္ဒရှိသမျှကိုထမ်းဆောင်ခြင်း. ပြတိုက်, ကြီးမားသောစျေးကွက်, ဘုရားရှိခိုးကြောငျး, ထိပ်တန်းအဆင့်မြင့်ဖန်တီးမှုဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာများ, ရုံတစ်နာရီကွာမြို့တော်ကနေဖြစ်ကြသည်, ရထားနဲ့.
ဒါကြောင့်, အကယ်၍ သင်သည်သင်၏အကြီးဆုံးစိန်အရောင်းအ ၀ ယ်စင်တာမှသင့်ကိုယ်ပိုင်စိန်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါက, ချောကလက်အချစ်, နှင့်စျေးဝယ်, အဆိုပါရိုက်နှက်လမ်းကြောင်းလမ်းကြောင်းကိုချွတ်ဒီမဖြစ်မနေဖြစ်ပါတယ်.
7. Off အဆိုပါ Beaten Path ကိုနေရာများ: Lucerne, ဆွစ်ဇာလန်
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိအချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုအတွက်အကောင်းဆုံးသောနေရာ, Lucerne ခမ်းနားဖြစ်ပါတယ်. အိုင်တလျှောက်လမ်းလျှောက်, Pilatus တောင်နှင့် Titlis တို့၏နှင်းဖုံးတောင်များသည်ရေတွင်ထင်ဟပ်နေသည်, ပတ်ပတ်လည်အဘယ်သူမျှမခရီးသွားည့်အတူ, ဆွစ်ဇာလန်အိပ်မက်.
များအတွက်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Lucerne အကြီးအအခြေစိုက်စခန်း တစ်နေ့တာခရီးစဉ် အဲလ်ပ်တောင်တန်းသို့, နှင့်ခရီးသွားများကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်. ဒါကြောင့်သင်ပျော်မွေ့ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရလိမ့်မယ်. နဂါးလမ်းကြောင်းကိုလျှောက်ပြီးကြိုးပန်းခြံမှာမင်းရဲ့ခွန်အားကိုစမ်းသပ်ပါ, Lucerne န်းကျင်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများနှစ် ဦး စလုံးဖြစ်ပါတယ်.
ဆွစ်ဂျာမန်နယ်စပ်ရှိအဲလ်ပ်တောင်ခြေရင်းတွင်တည်ရှိသည်, Lucerne သည်ဥရောပရှိသွားလာနေသောလမ်းကြောင်းမှမမေ့နိုင်စရာဖြစ်သည်. Lucerne သည်ဆွစ်ဇာလန်အလယ်ပိုင်းရှိလျှို့ဝှက်ကျောက်မျက်တစ်ခုဖြစ်သည်ဆွစ်လေဆိပ်မှရထားဖြင့်တစ်နာရီခန့်ကြာသည်.
ရထားအားဖြင့် Lucerne မှဇူးရစ်
ရထားအားဖြင့် Lucerne မှ Bern
ရထားအားဖြင့် Lucerne မှဂျီနီဗာ
ရထားအားဖြင့် Lucerne မှ Konstanz
ကောက်ချက်ချရန်, ဥရောပသည်အံ့ of ဖွယ်ရာများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်, ဒဏ္.ာရီ, လျှို့ဝှက်ချက်များ, နှင့်ခရီးသွား by ည့်တို့ကထိတွေ့. သင်သည်ဥရောပ၌အကြီးမားဆုံးသောနိုင်ငံများ၏ထူးခြားသောအတွေ့အကြုံနှင့်ခံစားမှုမျိုးကိုလိုချင်ပါက. သို့သျောလညျး, မင်းလမ်းလျှောက်ချင်ရင်, ဒေသခံတွေလိုပဲ, ထို့နောက်သင်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်နေရာများမဆိုအတွက်အံ့မခန်းအချိန်အတွက်၌ရှိကြ၏.
ဤတွင်မှာ တစ်ဦးကရထား Save, ကျွန်ုပ်တို့စာရင်းရှိအထူးနေရာများသို့အသက်သာဆုံးရထားလက်မှတ်များကိုသင်ကူညီပေးဖို့ကျွန်ုပ်တို့ ၀ မ်းသာပါလိမ့်မည်.
သင်၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်ကို“ ဥရောပရှိ Beaten Path Destinations off 7” ကိုသင်၏ကွန်ရက်ပေါ်သို့တင်ချင်ပါသလား? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/off-beaten-path-destinations-europe/?lang=my ့- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
antwerp မြို့ပြ မင်္ဂလာပါ နေပြည်တော် ရထားခရီးသွား ချစ်သူ ဟုတ်ပါတယ် travelitaly travelswitzerland